Praiminisitra Mahafaly Olivier : Lasibatry ny fanenjehan’ny mpanohitra -
AccueilRaharaham-pirenenaPraiminisitra Mahafaly Olivier : Lasibatry ny fanenjehan’ny mpanohitra
09/04/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Misy karazan’olona tsy sasatry ny manely tsaho hampisavorovoroana ny saim-bahoaka eto amintsika. Lasibatry ny fanenjehana avy amin’ny fanoherana indray koa mantsy ny praiminisitra Mahafaly Olivier tamin’iny faran’ny herinandro iny fa nilazana tany anaty facebook sy tambazotra tany fa nisy vola be mitentina 60 miliara very tao an-tranony, nangalarin’ny mpiasa an-trano.
“Tsy marina ary tsy mitombona velively ireny resabe naelin’ny sasany tany amin’ny tambazotra sy facebook ireny. Niaraha-nahita ny zava-nitranga tamin’ny farany herinandro dia ny fanalàna tao amin’ny tranom-panjakana an’i Christine Razanamahasoa. Noho ireny no antony hanenjehana sy handotoana ny tenako manokana”, hoy ny praiminisitra Mahafaly Olivier nitafa an-tariby tamin’ny mpanao gazety.
Fahavoazana nisesisesy ho an’ny mpanohitra tokoa mantsy no nitranga tamin’iny herinandro lasa iny, nanomboka tamin’ny fahatontosan’ny fifidianana sy ny fandaniana ireo volavolan-dalana mifehy ny fifidianana tao amin’ny Antenimieram-pirenena izay tena tsy zakan’ny mpanohitra mihitsy hatramin’ny androany. Amin’ny maha mpitondra tenin’ny vahoaka no nijoroan’ireo depiote miisa 79 nandany izany volavolanydalana izany izay nahatsapa tokoa fa tsy azo ekena intsony ny hanomezana vahana olona efa nampitondra fahoriana ny firenena sy ny vahoaka.
Tsy nijanona teo anefa izany fahavoazana izany fa niroso tamin’ny fanalana an’i Christine Razanamahasoa tao amin’ny tranom-panjakana izay nobodoiny nandritra ny dimy taona ny governemanta Mahafaly Olivier. Tsy nasian’ity ministry ny Fitsarana nandritra ny fitondran’ny mpanongam-panjakana ity dikany sy hajany mihitsy mantsy ireo taratasy fampilazana maro nalefan’ny ministeran’ny Vola, ny amin’ny tokony hialany ao amin’io tranom-panjakana io.
Ho setrin’izany rehetra izany, satria iaraha-mahalala fa volavolan-dalana avy tany amin’ny governemanta ireo nolaniana tao amin’ny Antenimieram-pirenena, teo koa ny fanesorana an’i Christine Razanamahasoa tao amin’ny tranom-panjakana dia izao lasibatry ny tsaho sy ny fanenjehana avy amin’ny mpanohitra izao ny praiminisitra Mahafaly Olivier.